Nangona abantu abaninzi beqinisekile ukuba inja ayinayo ingxaki ehambelana nokusetyenziswa kumphathi omtsha, kufuneka kuqatshelwe ukuba le ngxelo ayikwazi ukunyaniseka nangayiphi na indlela. Izinja ngokuqhelekileyo zinamathele kumatitshala abo kwaye zinamava okuzinikela kubo. Kwaye ke kuya kuba nzima ukuba batshintshele uthando lwabo komnye umntu, umnikazi omtsha.
Iimeko ezenza iimeko zibuhlungu kukuba inja ayikwazi ukuphuma kwindlu enye ukuya kwelinye, kodwa phakathi kwayo ibe yindawo yokukhusela isilwanyana esikhethekileyo, apho inja ingayi kukhululeka khona. Inja enjalo isele yazi ukuba ukungafani nokugatywa kukuphi, kwaye kuya kuthatha ixesha kunye nomonde ukuhlangabezana nale ngxaki.
Imikhwa yangaphambili kunye neemeko zokuhlala
Endaweni entsha, inja, ewe, iya kuba neentloni, ziphathe ngendlela engavamile. Ngoko ke, jonga umnikazi wangaphambili kwangaphambili ngemikhwa yakhe uze uzame ukudala izimo ezifanayo kuye. Kungcono ukuxhobisa indawo yokulala ngendlela ekhangeleka njengendawo yayo yangaphambili. Kuya kuba nzima inja ukuba ulungele ngokukhawuleza kwindlela yakho yemihla ngemihla, ngokokuqala uzame ukuhamba, uyondle ngexesha elifanayo kunye nabanikazi bangaphambili. Emva kwexesha, tshintsha ixesha, ufike ngokuzenzekelayo ngexesha eliya kuba lilungele kuwe.
Ukutya kwejaji kuya kufuneka ukuba utshintshwe ngendlela efanayo. Okokuqala, yondla kuphela oko abanikazi bokuqala babesondla. Emva koko qalisa ukongeza ukutya okutsha. Emva koko uye ngqo kulo. Ngokude ukutshintshwa kokutya okutsha kukulibazisekile, bhetele, ngoko kuya kuba lula ukuba inja ifundeke. Ukutya okutsha kufuneka kube bhetele kwaye kunomdla kunomdala. Yiyo ndlela onokukunceda inja ukunqoba ubunzima obubangelwa utshintsho kwimeko, ukungabikho kwenkosi endala.
Kwenzeka ukuba inja ayiyikuthandwa ngumnini omtsha kwizinto azithathileyo kwaye wayisusa kumnini. Mhlawumbi akayi kuthobela usuku lokuqala, enze into embi. Musa ukumgxeka, kungcono ukuwuthatha ngokuhlekisa. Kubalulekile ukuba uzame ukwenza umzekelo oncomekayo kuye, kodwa ngexesha elifanayo kufuneka uvumele ukwazi oko unokukwazi kwaye akunako ukwenza. Awukwazi ukukhuthaza ukuziphatha okubi, kodwa kungcono ukuba ungabonakali ukudumala ngokukhawuleza.
Yonke imihla, nizinike ixesha elithile lokunyamekela inja. Isibambiso seenja ezinomsila omfutshane, inwele emfutshane i-massage ekhethekileyo. Ukuze le nkqubo inokungcola okuncinane, bhinqa iphepha elidala kwijaji. Siyabulela oku, uxhumano lwakho nenja luya kuqiniswa, inja iya kufunda ukuba ingesabi ukuthintela kwakho, iza kuqala ukukuthemba. Ngoko ke, gxuma kwaye ugxininise inja rhoqo.
Ukuba kufuneka ushiye inja yedwa ekhaya, ungamvumeli ukuba ahambe ejikeleze indlu. I-Nervous, ingonakalisa kakhulu umhlaba. Oku kwenzeka ukuba inja, ingaqhelekanga kubantu abatsha nendawo, iyika ukuba uyilahlile, ukuba awuyi kubuya. Uloyiko, unako ukukhawuleza, uze uloyiko ngenxa yokuba ungayiphula. Ngethuba nje uya kufunda ukukuthemba.
Ukusebenzisa umphathi omtsha
Ngokuqhelekileyo xa utshintshe le meko kwenzeka ukuba inja ibalekela kumnini owedlule, okanye ibalekela ethembeni lokufumana inkosi yakhe, ngokokuqala ungamshiyi yedwa edieni. Yonke indlela uzame ukumkholisa, ukondla ngokuphindaphindiweyo, ukudala ukulungelelanisa kwakhe, ukwenzela ukuba kancane kancane asebenzise ingcamango yokuba akubi. Kuya kuba ngcono ukuba iiveki zokuqala emva kokufumana kwayo, uya kuhlala ujikeleze. Ngoko kuya kuba lula kuye ukuba ufunde ukubonakala kwakho. Ngeli xesha, wena ngokwakho uza kuba nolwazi olungcono, ufunde imikhwa yakhe, umlingiswa. Kubaluleke kakhulu ukwenza itekisi yenja ngolwazi loqha ga mshelwano, oluxhomekeke kwikhola. Ekubeni kungekaqhelwanga kuwe, kukho umngcipheko omkhulu wokuba uya kulahleka. Ngo kunceda kwithegi enjalo kuya kuba lula ukuyibuyisela. Unokubambelela intsimbi encinci entanyeni yakhe, ngoko kuya kuba lula ukuyilandela.
Ngokuqhelekileyo, zama ukwenza konke ukwenza ukuba ube ngumhlobo nelungu elitsha lentsapho, umkhuthaze ukuba wena, kwindawo yokuqala, ungumhlobo wakhe. Makhe aqonde ukuba kwindawo entsha uyathandwa ngendlela efanayo njengoko wayeyenzayo ngaphambili. Kwaye unokuba usenethemba lokunyaniseka kwenyaniso kunye nokuzinikela kuye.
I-Salmon kwi-sauce ecocekileyo
Indlela yokulahla izibonda ezimnyama phantsi kwamehlo: 3 iindlela ezifanelekileyo
I-TOP-3 imihlobiso yeenwele ezithandwayo
I-Enema kunye ne-soda ngokuchasene nama-parasites: izibonakaliso kunye nokuchasene
IJam kwi-blackberry (Kiev)
Izinwele ezincibilikiweyo: izixhobo kunye nezigaba zesitampu
Ilayisi ngama-prawn adibeneyo ngesiTshayina
Okroshka nge mustard
Imigaqo yokuziphatha ngomhla woLutsha